Mid ka mid ah salaadiinta Somaliland oo sheegay in uu dhamaaday gooni isu taagii – SBC
News, Programmes, video
Mid ka mid ah salaadiinta Somaliland oo sheegay in uu dhamaaday gooni isu taagii
Posted by editor on February 6, 2012 Comments
Mid ka mid ah salaadiinta caanka ah ee deegaanada la magac baxay Somaliland Suldaan Maxamed C/qaadir Suldaan Cabdilaahi ayaa shaaca ka qaaday inay dhamaatey hamigii gooni isu taaga isla markaana Somaliland dib ula mideyso Soomaalida inteeda kale.
Suldaan Maxamed C/qaadir oo ah suldaanka guud ee Somaliland ayaa sheegay in shirka London uu yahay mid lagu doonayo in Soomaaliya dawlad loogu dhiso oo aanay beesha caalamku dooneyn Soomaali fara badan ama dawlado badan oo Soomaaliyeed, isla markaana hadii aanay heshiin oo aysan dawlad dhisan dalka la galinayo maxmiyad.
Wareysi dheer oo lala yeeshay Suldaan oo uu kaga hadlayo arimaha dagaalada Buuhoodle, maamulka Khaatumo, Sida Soomaaliya loogu doonayo in loo kala qaybiyo oo loogu dhiibayo wadamada dariska ah sida Itoobiya iyo Kenya, isla markaana dalka maxmiyad lagu galinayo.
Si aad u dhageyso link-ga hoose riix.
maxamud aadan ahmed says:
ugu hurayntii waxan halkan uga mahad celinayaa suldan ka sida wanaasan ee uu ufekerayo tan kale waxan dadka soomaaliyee leeyahay waa in ay fahman
dantooda iyo wxa maslaxadoodu ku jirto. somaliduna uma baahna in ay kala qayb samaan ee waxa ay ubaahan yihiin in ay gacnaha isqabsadaan oo ay noqdaan ul iyo diirkeed taasi waa waxa aan ubaahan nahay hadan nahay dadka soomaaliyeed
asc/wrb suldaan Maxamed C/qaadir Suldaan Cabdilaahi waan salaamay salaan ka dib walalayaal suldaanka raaca soomaaliyeey meel kasta aad jooktaan hadalkiisa waa xaq waana hadal ka soo baxay maskax caafimaad qabta, umad waxey wax ku noqotaa waa wada jir hada waxaad fiirisaan dowladaha yurub waxeey fahmeen in ay wada jirka ay wanaagsan tahay, soomaaliyeey isku tanaasula oo gacmaha is qabsada hadii kale dhibaato lagama baxayo. wasalaamu caleykum
dr soomali says:
ani waxaan leeyahay waas asax hadalka suldaan wuu mahadasayahay dhamaanabb salaadiinta gobolada waqooyi ee soomaaliyana haku daydeen hadaalka saliimka ah ee uuu suldaanku yiri guuuuuuul midnimo nabab aan u rajaynayaa dadka dalka soomalida